Pakistana: Bilaogin’ny Mpitarika · Global Voices teny Malagasy
Pakistana: Bilaogin'ny Mpitarika
Voadika ny 01 Desambra 2018 18:51 GMT
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny fanaovangazetin'olompirenena sy ny laza tsy miaton'ireo bilaogy ho loharanon'ny fijery sy vaovao tsy mitanila, tsy ho ela dia hanaraka io hetsika io ihany koa ireo mpitarika an'izao tontolo izao, tahaka ny efa nataon'ny Filoha Ahmadinejad, ary hanomboka ny bilaoginy manokana mba hahafahany miaro ny lazany sy manome antsika ny fahafahana hihomehy tsy misy fetra amin'ity solon'ny hatsikana ao amin'ny Fox News ity.
Mamelà ahy ankehitriny hiverina amin'ny zavamisy ary hanolotra anareo rakitra kely an'ireo rohy tena mahaliana mankany amin'ny lahatsoratra miavaka vitsivitsy avy ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Pakistaney. Mamoaka asa soratra iray tsy misy tomika (rohy maty) izay tonga tanatin'ireo pejin'ny Baltimore Chronicle ihany koa i Fountainhead. Mamoaka lahatsoratra feno hatezerana amin'ny tatitra farany mikasika ny tombatombana vaovao momba ny isan'ny maty ao Iraka i Suspect Paki.
Ary ny olona rehetra manerana izao tontolo izao, indrindra ny tontolo tandrefana, dia hihinana finaritra ny sakafony amin'ity alina ity, tsy tonga saina, mangina, te hoderaina, tsy tonga saina tsara akory amin'ny fahavelomany, kanefa afa-po amin'ny fahafatesan'ireo Silamo. Eny. Mifaly amin'ny fahafatesan'ny vahoaka zarazara hoditra ny vahoaka fotsy. Aza mody gaga. Aza mody taitra. Efa izany no fomba fanao tanatin'ny zato taona maro.
Mitafatafa miaraka amin'i Ambreen Ali i PakCast momba ny tsingerintaona voalohan'ilay Horohorontany nandrava an'i Pakistana (rohy maty).
Herintaona aty aoriana ary manomboka aminà ririnina henjana, hoy izy, mbola vitsy loatra ny zava-bita ary mbola maro loatra ireo miaina anaty trano fonenana vinaninany.
Tanatin'ny valinteniko manoloana ity fironana vaovao momba ny Filoham-panjakana lasa bilaogera ity, Izaho, amin'ny maha bilaogera ahy, dia nanapa-kevitra fa hivadika ho Filoham-panjakana. Noho izany, te hampandre ny firotsahako ho Filoham-pirenen'i Pakistana amin'ny fifidianana manaraka eo aho. Heveriko fa efa ananako ireo fahaizana ilaina, satria vao avy nividy fanamiana jeneralin'ny tafika taloha aho miaraka amin’ireo haingo rehetra ilaina, anatin'izany ireo medaly takiana, lakolosy, ary kiririoka. Ho an'ireo izay mbola miahiahy ny fetezako amin'io toerana io, ny hany azoko ambara dia ity: raha misy tafika mpanao didy jadona sahy milaza fa Lohanà firenena ‘demokratika’, nahoana kosa aho no tsy ho afaka, (izaho izay bilaogera), hilaza ny tenako ho Lohan'ny Tafika sy Lohan'ny firenena?
Mandritra izany fotoana izany, manondro vohikala iray ho an'ireo silamo marary (rohy maty) i Windmills. Manoratra feno fihetsehampo ihany koa i Tears momba ny tsingerintaonan'ilay Horohorontany tao Pakistana (pejy voafafa).
Ary avy eo tonga ilay feo mahatsiravin'ny vato mikodiadia, mikotrokotroka, raha nirodana ilay trano biriky vao namboarina tao aorianay, izahay izay niaina tany amin'ny rihana ambony moa dia nahatsapa ny trano iray manontolo nihetsiketsika amin'ny fototra misy azy ary nandre ny reniko (izay tena matahotra fadiranovana ireny horohorontany ireny) nihiaka niantso ahy sy ny anadahiko. Nisaoty ny fandriako aho ary nihazakazaka nivoaka ny efitranoko hitazona ny reniko izay nisafoaka tanteraka sy antomotry ny ranomaso, niantsoantso ny anaran'ny anadahiko sy ny ahy na dia efa teo akaikiny aza ny anadahiko. Ary samy nijaridina teo, nifamihina teo amin'ny varavarana izahay telo mianaka, manao tsianjery izay azonay natao, mahatsapa ny tany mihovitrovitra ambanin'ny tongotray ary maheno ireo katrokatroka mafy anatin'ireo kabinetra miaraka amin'ireo trerona sy fifanjevoan'ny olona any amin'ny arabenay izay mangína andavanandro.
Ary farany, miady hevitra amin'ny tenako aho momba ny lahatsoratra iray anatin'ny bilaogy. Eny ary, izay no tamin'ity herinandro ity, ndeha hanova ny endrik'ilay fanamiana jeneraly vaovaoko aho. Lava loatra ny tanany dia fohy loatra ny pataloha, azonao ve?
23 ora izayAzia Afovoany sy Kaokazy